Train Travel Britain Archives | စာမျက်နှာ3၏4| တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား
ဥရောပတိုက်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များရှားပါးမျက်မှောက်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းနှင့်အတူကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ. ပဲရစ်, လန်ဒန်, ရောမမြို့, မြူးနစ်, ဗီယင်နာ - ဤမြို့ကြီးများ၏အားလုံးကမ်းလှမ်းရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သောအရပ်တို့ကိုမရှိ. ရိုးရာဇိမ်ခံပစ္စည်းအချို့ကိုတောင့်တသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်နေရာတစ်ခုရှာရန်မခက်ခဲပါ…
imts လူမှုရေးသမိုင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစဉ်အဆက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုအပေါများရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ဗြိတိန်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏. တဖန်သင်တို့တစ်ရထားလမ်းဝါသနာအိုးဆိုရင်, တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ရထားလမ်းအားလပ်ရက်နေရာများမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ Penzance မှ Aberdeen ကနေလမ်းအပေါင်းတို့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်. သင်၏နှလုံးရဲ့ set ကိုလျှင်…
ဒါဟာမတ်လအတွက်ထွက်ပေါက်စီစဉ်ဖို့သိပ်နောက်ကျမယ့်, အီစတာအလုအယက်၏ရှေ့ဆက်. ကလေးတွေအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ယခုချစ်ရသူနှင့်အတူ quaint ကျွန်းငယ်လေးများသို့လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်, embark upon the first great family travel…
ဂျူး Mardi Gras မည်သူမဆို? ပွဲတော်ကြီးစီရင် Enter! အာဒါ 14 နှင့် 15 ရက်စီရင်ကျင်းပ, မတ်လနှင့်တိုက်ဆိုင်သောဂျူးပြက္ခဒိန်၏ဒွါဒသမလ. စီရင်လေထုကဲ့သို့သောပွဲတော်ရှိပါတယ်, လူတို့သည်အကောင်းဆုံးသောဥပုသ်နေ့အဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဖန်စီဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်…
အခါဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့တော်သို့သွားရောက်ခြင်းမှကြွလာ, လန်ဒန်တိုင်းခရီးသွားဧည့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်မှာသခြောသည်နှင့်လုပ်ပါရန်အများအပြားအရာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ရှိပါတယ်. ဒါဟာတာရှည်တယ်ရဲ့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း; လှပသောအထင်ကရအဆောက်အနှင့်မြင်ကွင်းများ; and there’s plenty of things to…
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန် 2019
အကောင်းဆုံးဥရောပစားသောက်ဆိုင် Michelin လမ်းညွှန်ဥရောပတစ်ဝှမ်းရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်အကြီးအက start ကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ Michelin လမ်းညွှန်ယခုဥရောပခရီးသွားများအတွက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များတစ်ရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း 38 ဥရောပမြို့ကြီးများ. အသစ်သုံးမျိုးမြို့ကြီးများဤဆက်ပြောသည်ပြီ 2019 ထုတ်ဝေ: Zagreb…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပတိုက်ကြီးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်….
Dancing နဂါး, ကြံ့, နှင့်ဝက်ပျံ. ဟုတ်ကဲ့, ဝက်! အဆိုပါဝက်၏တစ်နှစ်တာအခမ်းအနားကျင်းပ, ဥရောပတိုက်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲ! တရုတ်နှစ်သစ်ကူး, ထို့အပြင်နွေဦးပွဲတော်သို့မဟုတ် Lunar New Year အဖြစ်လူသိများ, တရုတ်ပြက္ခဒိန်မှာအရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်. It’saspecial…
အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးရာသီဥတုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းအဘယ်သို့ဆိုရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးမိုးလေဝသနှင့်အတူဥရောပနိုင်ငံများရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ. နောက်ဆုံးတော့, သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့, မ? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာငါတို့စာတမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်…
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ခုခုပျစ်သီးအားဖြင့်ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ခဲ့ဖူး, ရထားနဲ့တူ? ဘယ်လိုမှတက်သွားလာအသံပါဘူး 300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ? ဥရောပသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှအလျင်အမြန်သင်ယူလိမ့်မည်ဟုမြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်. သာ high-speed ရထားန်ဆောင်မှု…